Phupha Ngomakhulu Osele Wasweleka / Wasweleka [ Intsingiselo Ityhiliwe! ]
kuqala » Amaphupha » Phupha ngomakhulu osele eswelekile
Phupha ngomakhulu osele eswelekile
Ngelishwa, kukho abantu abanomkhwa ukuphupha umakhulu osele eswelekile, oko kukuthi, osele engasekho.
Olu hlobo lwamaphupha lushiya abantu abaninzi bedidekile kwaye bengazi ukuba bacinge ntoni, kuba ootatomkhulu noomakhulu bethu ingabantu esichitha ixesha lethu elininzi kunye nabo.
Ukunceda ukucacisa onke amathandabuzo akho, sigqibe ekubeni senze eli nqaku.
Siza kukubonisa intsingiselo yephupha lakho kwaye sikuxelele ukuba kutheni uphuphe ngalo.
Yazi kwangoko ukuba ukutolika amaphupha akho kukuvumela ukuba wazi izinto ezinokuthi zenzeke kwixesha elizayo, zinokuba yimiqondiso yokuba into entle okanye embi izakwenzeka.
Kubaluleke kakhulu ukwazi ukuba kutheni uphupha malunga nogogo wakho ongasekhoyo, uya kuqonda ukuba kutheni kungekudala.
Ngaphandle kokunye, khangela apha ngezantsi intsingiselo yephupha lakho.
Kuthetha ukuthini ukuphupha umakhulu sele eswelekile
Ngaphambi kokuba ndikuxelele ngokuqinisekileyo ukuba kuthetha ukuthini ukuphupha umakhulu oswelekileyo, kufuneka ucinge kancinci malunga nokuba lalinjani iphupha lakho.
Ngaba umakhulu wakho wayephila ephupheni?
Ngaba ubuyile kuwe?
Okanye ngaba umakhulu wakho uyaphila kwaye uyaphupha ekwibhokisi?
Nokuba ithini na imeko yephupha lakho, silungiselele ingcaciso yentsingiselo yalo nganye kuzo.
Jonga nje ngezantsi, jonga ukuba yayinjani imeko yephupha lakho kwaye wazi intsingiselo yalo 100% ngokuchanekileyo.
Phupha ngomakhulu osele wasweleka ephila
Eli phupha lenzeka xa umakhulu sele eswelekile, kodwa siphupha ephila ecaleni kwethu.
Uphuphe nje umakhulu osele eswelekile ephila? Ngoko ke makhe sikucacisele intsingiselo.
Oku kuthetha ukuba uya kuba nalo lonke uncedo oludingayo ukusombulula zonke iingxaki zakho, ngakumbi iingxaki zemali.
Umakhulu wakho mhlawumbi ebeyintsika yakho, umntu omnandi, umntu obesoloko ezimisele ukukunceda, ngoko ke unaye entloko njengomntu okuncedayo.
Ukuphupha ngaye ephila kuthetha ukuba awuyi kuswela nkxaso, nangaphandle kobukho bakhe emhlabeni.
Kusenokwenzeka ukuba ujongene nobunzima bezemali, kodwa uya kuba nenkxaso oyifunayo ukuze uhlangabezane nale meko imbi.
Qiniseka ukuba, eli phupha lisisilumkiso, isilumkiso esihle sokuba awuyi kuba wedwa kwixesha elizayo xa kuvela iingxaki.
Phupha ngomakhulu osele eswelekile emqolo
Eli phupha lenzeka xa siphupha umakhulu wethu obhubhileyo esifulathele.
Ngamanye amaxesha le meko ayilophupha, kodwa iphupha elibi, kodwa nangona kunjalo kuhle ukuba nayo kuba isisilumkiso sokwenene.
Ngokuchasene nephupha elingasentla, eli lithetha ukuba abantu baya kuba neengxaki ezinzulu kwixesha elizayo ezinxulumene nemali kwaye abayi kuba nenkxaso enkulu yokuzisombulula.
Umakhulu wakho owaswelekayo inokuba nguye owakuncedayo ngetyala, njengokuba wawumbone ngasemva wazibona ukuba akanakuphinda akuncede njengoko engekho kuthi.
Xa uphupha umakhulu sele ebhubhile esemva kwethu kuthetha ukuba asisenayo inkxaso yakhe.
Nangona kunjalo olu luphawu lwesilumkiso, isilumkiso sokuba womelele, kunye okanye ngaphandle kwenkampani yakho.
Hlala uqinile, usondele kusapho, ngoko akukho nto inokukuthoba.
Ayililo elinye lamaphupha angcono onokuthi ube nawo, kodwa yithathe kakuhle, yithathe njengesilumkiso sokulungiselela okuzayo.
Phupha umakhulu ongasekhoyo ethetha
sele sithethile Intsingiselo yokuphupha uthetha nomntu oswelekileyo kwaye eneneni eli phupha linxulumene nelo nqaku.
Ukuphupha umakhulu ongasekhoyo ethetha akunantsingiselo icacileyo malunga nokuba kwenzeka ntoni okanye ingenzeki kwixesha elizayo.
Ithetha into enye kuphela: Amagqabi!
Liyinyani, eli phupha ayilophawu lwesilumkiso, ayilophawu lomona okanye nantoni na enjalo.
Uyamkhumbula nje loo mntu, ukhumbula ukuba kunye naye, ukuhlala naye nokuthetha naye.
Iingxoxo kweli phupha azikho nto kwaye akukho nto ingaphantsi komzekeliso olula weminqweno yakho.
Cinga ngako, uyamkhumbula umakhulu wakho, uyazikhumbula iincoko zakho, kwaye mhlawumbi ubusoloko ucinga ngayo.
Akhonto imbi xa uphupha umakhulu sele eswelekile yindlela yokuba sikukhumbule.
Ukuba umakhulu wakho ongasekhoyo wayekhala, imeko iyatshintsha kancinci...
Yijonge apha ngezantsi.
Phupha umakhulu ofileyo ekhala
Ukukhala emaphupheni kunqabile ukuba kube nentsingiselo entle kwaye ukuphupha umakhulu ongasekhoyo elila ayilophawu luhle.
Oku kuthetha ukuba uya kudlula ngamaxesha amabi ebomini bakho anxulumene neminqweno okanye ubuhlobo.
Akunakwenzeka ukugqiba ngokuqinisekileyo ukuba kuya kuba yintoni na, nokuba ngaba ubuhlobo okanye iminqweno, kodwa kunokwenzeka ukugqiba ukuba ezi ziqendu zingaphantsi ezintle oza kuhamba nazo ziya kukuchaphazela kakhulu.
Isenokuba kukungcatsha nje abahlobo okanye ukungcatshwa ngokunzulu ngothando.
Qaphela umyeni wakho, abahlobo bakho kunye nabo bonke abakungqongileyo.
Kukho intlungu ebuhlungu endleleni, kwaye akunakwenzeka ukwazi ukuba ivela kubani.
Okuqinisekileyo kukuba uya kuza kwiintsuku ezimbalwa ezizayo, hayi ngakumbi.
Ukuphupha umakhulu osele eswelekile ekhala sisilumkiso oko kufuneka kuthathelwe ingqalelo.
Phupha ngomakhulu ongasekhoyo osebhokisini – Usaphila
Uyaphila umakhulu wakho waphupha efile esebhokisini?
Abantu abaninzi banxulumanisa eli phupha kunye nento yokuba ugogo wabo unexesha elifutshane lokuphila, kodwa inyaniso kukuba lithetha okuchasene ngqo!
Ukuba uphupha nje umakhulu ehlala ebhokisini, lo ngumqondiso obalaseleyo.
Luphawu lwempilo, amandla kunye nobomi obude.
Umakhulu wakho ngumfazi owomeleleyo, osempilweni kwaye unomnqweno omkhulu wokuphila kwaye eli phupha libubungqina baloo nto.
Naxa sele emdala, unenkqubo yokuzikhusela eyomeleleyo kwaye uyilungele yonke imiceli mngeni yobomi, ngakumbi imingeni ephathelele impilo.
Musa ukoyika eli phupha, luphawu oluhle, luphawu lokuba umakhulu wakho uya kuphila ixesha elide.
phupha ngokufa komhlobo
Phupha ngomama osele eswelekile
phupha umntu ezama ukukubulala
Umele ukuba sele uyiqaphele loo nto phupha umakhulu osele eswelekileokt umntu oswelekileyo akasoloko eluphawu olubi, konke kuxhomekeke kuhlobo lwephupha onalo.
Sizamile ukucacisa onke amathandabuzo akho, kodwa ukuba usenawo, ungalibazisi ukushiya isilumkiso esincinci apha.
<< Buyela kwiMysticBr
1 Kuthetha ukuthini ukuphupha umakhulu sele eswelekile
1.1 Phupha ngomakhulu osele wasweleka ephila
1.2 Phupha ngomakhulu osele eswelekile emqolo
1.3 Phupha umakhulu ongasekhoyo ethetha
1.4 Phupha umakhulu ofileyo ekhala
1.5 Phupha ngomakhulu ongasekhoyo osebhokisini – Usaphila
UAlexandro Rodrigues da Silva
NgoSeptemba 21, 2018, 4: 34 pm
Ndiphuphe umakhulu wam owaswelekayo elele esibhedlele umama emgcina lithini eliphupha
Nge-8 ka-Okthobha 2018, 10: 27 am
Ndiphuphe umakhulu wam ongasekhoyo endifowunela endicela ukuba ndimthengele izinto zokwenza isonka esigcwalisiweyo ndabuza ba kutheni wandiphendula wathi uzosenza isonka endisifunayo, ndaphendula kodwa namhlanje andinamali kwaye. wavuka iinyembezi
Nge-9 ka-Okthobha 2018, 12: 51 am
Ndiphuphe umakhulu wam, wabonakala kum ethetha ngendlu awayehlala kuyo esaphila, oko waswelekayo unengxaki yokubhideka ebantwaneni bakhe ngenxa yalendlu, ephupheni uxakeke kakhulu. wandicela ukuba ndiphume endlini iwa lithetha ukuthini eli phupha